Fabio Coentrao oo doonaya in uu ka tago Real Madrid dib ugu laabto Benfica.
8/7/2012 4:14:00 PM
| Comments() Lisbon--KNN--Difaaca buuxa ee kooxda kubadda cagta ee Real madrid iyo xulka qaranka Portugal Fabio Coentrao ayaa shaaca ka qaaday in uu doonayo in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee rer Portugal Benfica.
Difaaca buuxa ee kooxda kubadda cagta ee Real madrid iyo xulka qaranka Portugal Fabio Coentrao ayaa shaaca ka qaaday in uu doonayo in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee rer Portugal Benfica.
Jornal de Noticias jariiradda lagu magacaabo kana soo baxda Bortuqiiska ayaa saaka Qortay in ciyareyahanku uu ka murugsanyahay kana walaacsanyahay qaab dhaqanka Taageerayaasha Real oo uu sheegay in ey yihii kuwii ugu xumaa ee uu abid isagu arko.
Xidigan in uu laabto sababaha loo aneynayo waxa ka mid ah in in uu ad u necbeystay Hab dhaqanka Tageerayasha kooxdasi iyo weliba hadalada qar oo ay ku’oronayaan
Waxana ey xataa sabab u noqon kartaa coentrao oo laabta in Axel Witsel xiddiga lagu magacaabo uu iska diido in uu ku soo biro real maxa yelay waxa ey saxiibo isku dhow yihiin Coentrao haduu ka tago Real na waxa suura gal ah in uu ka baaqsado ku biiritanka kooxdasi.